မိုးမှောင်ဆိုတာ အမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူး. သိတယ်မှတ်လား.အနုပညာနာမည်လေ.လူရှိန် အောင်လို့….ပညာရေးကတော့ UCSY (University of Computer Studies,Yangon) ကနေ မနေနဲ့တော့ဆိုပြီး ဘွဲ့ပေးလိုက်လို့ B.C.Sc ဘွဲ့လေးတော့ရထားတယ်……. ကြွားတယ်လို့ တော့မအောင်းမေ့ပါနဲ့……….
လိုင်းကားကကြပ် ၊ ချွေးကထွက်နှင့်
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 2:26 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Database Technology နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
Database နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် လေ့လာမိရာမှ စဉ်းစားမိသည်များ ရှိလာ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Database နှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဌာနများသာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများတွင်ပါ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုမှု နည်းနေ သေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများသည်ပင်လျှင် Microsoft Access နှင့် SQL လောက်သာ အနည်းငယ်ရင်းနှီးသည်။ Oracle ဆိုလျှင် ဘာကောင်ကြီးမှန်းပင်မသိချင်။ ဒါက နည်းပညာအပိုင်း ဖြစ်သည်။ အသုံးချမှုအပိုင်းတွင်လည်း အသုံးချမည့်နေရာဌာန နည်းပါးနေ၍ လေ့လာသူများ နည်းပါးနေသော ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်နေသည်။ ကျောင်းသား အများစုမှာလည်း Java, .Net, C# စသည့် Programming Language များကိုသာ အာရုံစိုက်လေ့လာကြသည်။ Database နှင့်ပတ်သက်လျှင် အနည်းငယ် မျှသာ လေ့လာလေ့ရှိကြသည်။
ကွန်ပျူတာကိုအသုံးချမှုတွင် အများဆုံးနေရာမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ အများစုသောလုပ်ငန်းများတွင် ကွန်ပျူတာသည် လက်နှိပ်စက် သာသာလောက်သာ အသုံးချနေကြပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာကို စာစီစာရိုက်လောက်သာ အသုံးချနေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာနည်းပညာကို အသုံးချသည့် ပုံစံပြောင်းလဲလာပါက Database နည်းပညာ (ဝါ) Database ကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည့် ပညာရှင် (Database Administrator-DBA) များ လိုအပ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အချိန်တွင်တော့ စူပါမားကတ်ကြီးများနှင့် တစ်ချို့ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင်သာ အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ Database စနစ်၏ အားသားချက်မှာ စာရင်းတ်ိကျခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ ကုန်အဝင်အထွက် စာရင်းကို လူသားတို့ဖြင့် Manual လုပ်ဆောင်လျှင် တစ်ခါတစ်ရံ၌ အရောင်းစာရေးများ၏ မှားယွင်းမှုများကြောင့် လွဲမှားမှုများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ Database နည်းပညာကို အသုံးပြုပါက စာရင်းဇယား များကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
အစိုးရဌာနများ အနေဖြင့်မူ Database နည်းပညာဖြင့် တစ်ဌာနရှိစာရင်းများကို အခြားဌာနမှ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားလျှင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ Database တွင် (ဖွားသေစာရင်း) အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းထားပါက ထိုကလေးမှတ်ပုံတင်လုပ်လျှင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှ မွေးသက္ကရာဇ်အမှန်ကို ထိုစာရင်းမှ အထောက်အထားရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ထိုကလေး ကျောင်းနေသော အခါတွင်လည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထိုအချက်အလက်များကို အသုံးချနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝန်ကြီးဌာနများအကြား Data များကို Share လုပ်ပြီးသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ e-Government စနစ်ကို ဖော်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် အရေးကြီးဆုံးမှာ Database စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ Database စနစ်ကို အောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်လျှင် ပြည်သူများ၏ တာဝန်ဖြစ်သော အခွန်ဆောင်မှုများ၊ အစိုးရရုံးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြားလူမှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ်အေးချမ်းသာ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Database စနစ်ကို Online စနစ်နှင့်မရောထွေးစေလိုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Database စနစ်ထူထောင်ထားလျှင် ပြည်သူများရုံးကိစ္စကို အိမ်မှပင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု သဘော မသက်ရောက်ပါ။ ရုံးသို့သွားရောက် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများမှာ ရုံးသို့သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် Database စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ရုံးကိစ္စများဆောင်ရွက်သောအခါ ဖိုင်ရှာရအုံးမည်၊ အချိန်အနည်းငယ်ကြာမည်၊ နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လာခဲ့ပါ စသော အသံများ ပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာသည် ဘယ်တော့မှမငြီးပါ။ “မရလို့ပါ ရရင်လုပ်ပေးပါတယ်” ဟုလည်း မပြောတတ်ပါ။ သူအတတ်နိုင်ဆုံး (Database ထဲတွင်စာရင်းရှိလျှင်) ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Database စနစ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိနားလည်အောင် လေ့လာထားဖို့တော့ လိုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင်တော့ File များကို Copy ကူး၍ Hard-Disk ထဲတွင် စုပြုံထည့်ထားခြင်းကိုပင် Database ဟုထင်နေသော ဌာနများရှိနေသေးပါကြောင်း…………….
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 11:52 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Labels: ဆောင်းပါး, တွေးစရာများ
BoB နှင့် လေးဖြူကို အရှင်လတ်လတ် စင်ပေါ်မှာပြန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Alpine Music Tour 2009
ကိုလေးဖြူစင်ပေါ်မှာ သီချင်းပြန်ဆိုမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း မနေနိုင်တော့ဘူး။ သွားအားပေးရတာပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၃၁ ရက်နေ့များက Alpine ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ IC အဖွဲ့ရဲ့ ရှိုးပွဲကို ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ (၃၁) ရက်နေ့မှာ သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ညနေ (၆) နာရီကျော်တာနဲ့ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ IC ပရိတ်သတ်ဟာ လမ်းပြည့်တဲ့အထိ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ စတိတ်စင်အရှေ့မှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေက အစောကြီးကတည်းက နေရာယူထားကြပါပြီ။ ၇ နာရီထိုးခါနီးလောက်မှာပဲ ကိုလေးဖြူရဲ့ သေချင်းရဲ့တံခါးများ ဆိုတဲ့ Rock အပြင်းစားနဲ့ စပြီးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မျိုးကြီးရဲ့ ကျောက်စာများ သီချင်းနဲ့ ပွဲကပိုပြီးမြူးလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုအငဲ၊ ဝိုင်ဝိုင်းတို့ တစ်လှည့်စီဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုကတော့ အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှတိုးလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ “လေးဖြူ..လေးဖြူ” ဆိုပြီး ကိုလေးဖြူကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး တောင်းဆိုနေခဲ့ကြပါပြီ။ ကိုလေးဖြူကလည်း BoB ထဲက နားထောင်မလား ဆိုပြီး “BoB, BoD, BoC” ဆိုတဲ့ အော်သံနဲ့အတူ “မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့ လက်နက်ငါချပြီးသား” သီချင်းကို စဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့လမင်း၊ သံယောဇဉ်၊ စာမျက်နှာ (၁၅) စတဲ့ သီချင်းအေးလေးများကို သီဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ထူးခြားတာလေးတွေကတော့ ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ တရုတ်သံဇဉ် သီချင်းအေးတစ်ပုဒ်ကို Rock ဆန်ဆန်သီဆိုသွားတာပါ။ နောက်ပြီး ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ တယ်လီဖုန်း သီချင်းကို လိဒ် Intro ကိုလေးဖြူကတီးပြီး မျိုးကြီးက Bass ဂီတာတီးပြီး သီဆိုသွားပါတယ်။ ဒီသီချင်းမှာပဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုအငဲက Solo ဝင်တီးပေးသွား ပါတယ်။
နောက်ထပ်ထူးခြားတာကတော့ ခရီးဆုံးထိ ကို ပရီတ်သတ်ကသီဆိုပြီး ကိုလေးဖြူကိုယ်တိုင် Hollow Guitar တီးပေးသွားတာပါ။ ပွဲပြီးဖို့အချိန်နီးလာတာနဲ့အမျှ ပရိတ်သတ်ကလည်း ကိုလေးဖြူကိုပဲ တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ ကိုလေးဖြူကလည်း ပရီတ်သတ်ကိုလိုက်လျောတဲ့ အနေနဲ့ အလင်းရောင် ကိုဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ IC တစ်ဖွဲ့လုံး ရောဂါ ကို သီဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ “’ဒီလိုငါ ရုတ္တိမရှိတဲ့အဖြစ်ကို ငါရုတ္တိရှိဖို့မွန်းမံနေရင်း” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ပွဲကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ ကိုလေးဖြူ သက်လုံကျနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အရင်လောက်တော့ မဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတာကြောင့် ပွဲပန်းတာလဲပါနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ မျိုးကြီးနဲ့ကိုအငဲက တော်တော်ထိန်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုလေးဖြူအားရပါးရ မဆိုနိုင်တာနဲ့ မျိုးကြီး တစ်ချက်အော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အသံမဆိုသလောက်လေး ပျောက်သွားတာကလွဲလို့ ဒီနေ့ပွဲဟာ IC ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ကျေနပ်မှုရခဲ့ပါတယ်။ IC အဖွဲ့ရဲ့ Alpine Music Tour 2009 အောင်မြင်ပါစေ။ ဒီထက်လဲအောင်မြင်ပါစေ……
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 8:20 PM 1 မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Labels: သတင်းများ, ရောက်တတ်ရာရာ
If I would reverse my past
If I will pass my future
Present will be so nice
As I can’t control past and future
Present left me withamoment
So, in this world
What thing I really possess? If I would reverse my past
What thing I really possess?
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 10:36 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
ငါ့ဒေါသကို ငါသိလို့ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာ
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 11:17 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Labels: ကဗျာ, စိတ်ထွက်ပေါက်
HTML အရောင် Code များ
Web Site များ၊ Blog Template များပြင်ရာတွင် အရောင်ကုဒ်များ ရှာရသည်မှာ အချိန်အလွန်ကုန်သည့် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်ကုဒ်များကိုဖော်ပြပေးသည့် ဆိုဒ်များမှာလည်း ကုဒ်နံပါတ်နှင့် အရောင်ကို စာဖြင့် ဖော်ပြပေးကြသည်သာ များပါသည်။ ထိုအခက်အခဲကို ပြေလည်စေရန်အတွက် HTML အရောင် Code ဖိုင်ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ အခက်အခဲတွေပြေလည်သွားပါမယ်။
ယခုဖိုင်တွင် အရောင်ပေါင်း ၄၀၉၆ ရောင်ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ ကွန်ပျူတာတွင် အရောင်ကို ၂၅၆ ရောင်ဟုသာမှတ်သားထားပါသည်။ သို့သော် အရောင်ကုဒ်များအရ တွဲစပ်မှုတွင် အရောင်ပေါင်း သန်းရာချီ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ #000000 မှ #ffffff အထိ အရောင်များကိုတွက်ကြည့်လျှင် သန်းနှင့်ချီ၍ရှိပါသည်။ ကွန်ပျူတာတွင် အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင်များကို တွဲစပ်၍ အခြားအရောင်ကွဲများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုဖိုင်တွင်တော့ RGB နံပါတ်တူများကို အခြေပြုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ #000000 မှ #0000ff ထိ ၁၆ ရောင် #001100 မှ #0011ff ထိုကဲ့သို့သွားရာ နောက်ဆုံး #ffffff ထိ ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာ အရောင်ပုံစံကို အောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အရောင်မှာ အပေါ်မှဖြစ်ပြီး အရောင်ကုဒ်မှာ အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 10:32 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Labels: download, အရောင်များ၏ သဘော
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 9:57 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
ကောင်ကင်ကြီးမှာ ပြည့်နေတဲ့ ကြယ်ကလေးတွေပါကွာ
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 9:24 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
ဘာကြောင့် Blog တယ်
ကျွန်တော့်ကို ညီငယ်တစ်ယောက်က မေးတယ်။ ဘာလို့ Blog ရေးတာလဲ။ Blog ရေးတော့ဘာတွေရလဲတဲ့။ သူမေးတော့မှ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားမိတော့တယ်။ သူမေးတုန်းကတော့ အကောင်းဆုံး အဖြေကိုမပြောနိုင်လို့ အခုမှပဲ ပို့စ်အနေနဲ့ ရေးလိုက်ရတယ်။
ဒါတွေကြောင့် Blog ရေးတယ်…
ကျွန်တော်က စာရေးတာ ကဗျာရေးတာကို ၀ါသနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Professional အနေနဲ့ ဘ၀ကိုရင်းပြီး စာရေးဆရာ လုပ်ဖို့ကလဲ မလုပ်နိုင်ဘူး။ (အဲ့လောက် အရည်အချင်း မရှိတာလဲ ပါတယ်ပေ့ါ) အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်ရေးချင်တာရှိရင် Blog မှာ ရေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ ၀ါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ စာတွေရေးပြီး မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေ ပို့ရင်လည်း အပယ်ခံရတာက များတယ်လေ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အကောင်းဆုံးမှတ်တာကိုး။ အဲ့ဒီတော့ အပယ်ခံလည်း မဖြစ်ချင်ဘူး။ Blog မှာရေးရင်တော့ အဲ့ဒီပြဿနာလုံးဝမရှိဘူး။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့အခါ Publish Post ဆိုတာနဲ့ အဆင်ပြေပြီ။ ဘယ်သူမှ မပယ်ဘူး။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကိုတော့ ကိုယ်တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့။
နောက်ပြီးတော့ Blog မှာ စာလာဖတ်တဲ့သူတွေက မကြိုက်ရင်လည်း မကြိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ကြိုက်ရင်လည်း ကြိုက်တဲ့အကြောင်း Comment လေးတွေ ချန်သွားနိုင်သေးတယ်။ စာဖတ်သူတွေထားသွားတဲ့ Comment လေးတွေကလည်း Blog မှာ စာရေးသူတွေ အတွက်တော့ ပီတိပဲ။ Blog မှာ စာရေးရတာကို နှစ်သက်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော့ လွတ်လပ်မှုရှိတာကိုပဲ။ ကိုယ်ရေးချင်တာရေး ဘယ်သူမှ ဖြတ်တာတောက်တာ မရှိဘူး။ စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ကလည်း မကြိုက်ရင် ကျော်ဖတ်သွား၊ ရောက်လာပြီး လုံးဝမဖတ်ပဲ ပြန်သွားတာ၊ နောက်လုံးဝမလာတော့တာ၊ ဆန္ဒရှိသလို လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ မကျေနပ်ရင်လည်း Cbox မှာ မကျေနပ်တာကို ပြောသွားနိုင်သေးတယ်။ ဘယ်လောက်လွတ်လပ်လဲ။ ကိုယ့်က မကျေနပ်ရင်လည်း (သူ့မှာ Blog လိပ်စာရှိရင်) ပြန်လိုက်သွားပြီး ချေပနိုင်သေးတယ်ဗျာ။ ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ Blog တွေဟာ လွပ်လပ်သေးတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘယ်သူကမှ ထိန်းချုပ်ထားတာ မရှိဘူးလေ။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေနဲ့တော့ ကျွန်တော့ကို မငြင်းကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ကိုယ်ရေးချင်တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးခွင့်ရနေတာကို ပြောပါတယ်။ ရေးနေကြလို့လဲ Blog တွေပေါ်မှာ စာအစုံ ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေရတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာကတော့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရေး မူအတိုင်းပေါ့ဗျာ။ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်ဘာကြောင့် Blog ရေးလဲဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးချင်တာရေးလို့ ရလို့ပါလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
Blog ရေးတာ ဘာတွေရလဲ ဆိုရင်တော့ ပီတိတွေရတယ်ဗျာ။ နည်းပညာ အကျိုးအမြတ်ရတယ်ဗျာ။ ဥပမာ Blog ရေးသူတစ်ယောက်ဟာ အရင်က ဘာမှမတတ်ပေမယ့် Blog ရေးသားလာတာကြာရင် Web Design နဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းအမြင်ရှိလာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့အမြင်ပေါ့လေ။ ကိုယ့် Blog လေးကို လူလာလည်ချင်စိတ် ပေါ်အောင် ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ ကိုယ့် Blog မှာတော့ Web Designer ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ HTML တို့ Java Script တို့နဲ့လည်း ရင်းနှီးလာတယ်။ ပြီးတော့ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေရတယ်ဗျာ။ စာတွေအစုံဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် Blog ကို လူလာအောင် သူများ Blog တွေ လျှောက်သွားရတာကိုး။
ပြီးတော့ လက်ရှိလူငယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ သိရတယ်။ (Blog ကို လူငယ်အများစု ရေးနေကြလို့ပါ။) တကယ်တော့ ဒီအချက်ဟာ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် အဖိုးတန်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ဆက်သွားမယ့်မူအရ (၂၀၁၀) မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ကြတဲ့အခါ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကုန်ကျစရိတ် နည်းနည်းနဲ့ မဲဆွယ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ Blog တွေပေါ်မှာ ရနိုင်တယ်ဗျာ။ ဒါကတော့ ကြိုတွေးကြည့်တာပေါ့လေ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးချင်ရင်လည်း Blog တွေကနေ ပေးနိုင်တယ် ထင်ပါတယ်။ Web Site တွေထက်စာရင် Blog တွေက ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာတယ်ဗျာ။
အရာရာတိုင်းကတော့ အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာပေါ့လေ။ ယူတတ်ရင်တော့ အဆိုးတွေပယ်ပြီး အကောင်းတွေ ယူလို့ရတာပေါ့။ ဒါကတော့ Blog ရေးတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့အမြင်ပါ။
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 11:43 PM 19 မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
ကိုယ် ဘယ်လိုမှ စိတ်မချနိုင်ဘူး
မင်းကလည်း ကိုယ့်ကို ယုံပါတယ်ဆိုပေမယ့်
တို့နှစ်ယောက်ကို အလွမ်းပြေ ဆုံတွေ့ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့
ဖုန်းလိုင်းလေး ၊ Gtalk လေးတွေရှိပေမယ့်
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 12:15 PM0မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
အမြင်မတော် တာလေးတွေ ပြောချင်လာလို့။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာပေါ့။ မြို့ထဲကနေ လိုင်းကားစီးသွား မြေနီကုန်း မှတ်တိုင်ကျော်ရင် မီးပွိုင့်ကိုရောက်ရော။ ပြည်လမ်းပေါ်မှာလေ။ ကားစပယ်ယာတွေက ပိုက်ဆံလေး လိပ်ပြီး မီးပွိုင့်က ယာဉ်ထိန်းရဲဆီ ပစ်ပေးနေတာ မြင်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ခါလည်း မဟုတ်။ နှစ်ခါလည်းမဟုတ်။ တစ်စီးတည်းလည်း မဟုတ်။ ဖြတ်သမျှ လိုင်းကားအကုန် ပစ်ပေးနေရတာ။ ဘာကြောင့်လည်း ဘာအတွက်လည်းပေါ့ သိချင်လိုက်တာ။ ရတဲ့ပိုက်ဆံကလည်း ၃၀၀ တောင် ကျော်မယ် မထင်ပါဘူး။ အင်း ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ တစ်နေ့လုံးဆိုတော့ ဖြတ်သွားတဲ့ လိုင်းကားတွေက နည်းတာမှမဟုတ်တာ။ မနည်းရမှာပဲနော်။
အဲ့ဒီလိုလုပ်ရပ်က ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း ရှက်စရာတော့ ကောင်းသလားလို့။ အဖွဲ့အစည်း အတွက်လည်း မကောင်းဘူး ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အနေနဲ့တော့ အင်မတန် ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ မီးပွိုင့်ဆိုတော့ ကားကရပ်လို့ မရဘူးလေ။ ဖြတ်သွားတုန်း ပိုက်ဆံခေါက်ပြီး ပစ်ပေးရတာ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လိုရာမရောက်တာ ရှိတာပေါ့။ လမ်းမပေါ် ကျတာတို့ ဘာတို့။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့များ ထွက်ကောက်လဲ မသိပါဘူး။ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ပေါ့လေ။ ဖြစ်လေရာ ဘ၀မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ယဉ်ထိန်းရဲ မဖြစ်ပါရစေနဲ့ဘုရား။
မိုးမှောင်တို့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တော်တော်လေး လွဲနေတယ်။ ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်း ၀င်စားတော့လည်း အမြင်မတော်တာ တွေ့ပြန်ရော။ တခြားဝိုင်းမှာ ရောက်နှင့်နေတာက ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက်ရယ်၊ မရက အဖွဲ့ဝင်ဆိုသူ နှစ်ယောက်ရယ်၊ အပူသည်ရုပ်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရယ်။ သူတို့ ပြောဆိုနေသံကြားရတာက အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ ယောင်္ကျား (ဆိုက်ကားသမား ထင်တယ်) အဖမ်းခံထားရတယ်။ မူးပြီးရမ်းကားမှုနဲ့။ မူးပြီးရမ်းတယ် ဆိုတာကလည်း ရပ်ကွက်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့အရာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ရပ်ကွက်က တာဝန်ရှိသူတွေ ထိန်းသိမ်းပြီး အဆင်ပြေသွားတာပဲ။ အခုတော့ မတည့်တဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်က တိုင်လိုက်ပုံရပါတယ်။ ရဲအရေးပိုင်ထဲ ရောက်သွားပြီး အဖမ်းခံရရော။ ဒါမျိုးကလည်း အကြာကြီးချုပ်လို့ မရပါဘူး။ တစ်ရက်တန်သည် နှစ်ရက်တန်သည် ချုပ်ထားပြီး ပြန်လွှတ်မှာပါ။ မိန်းမဖြစ်သူကတော့ စိုးရိမ်ရှာမှာပေါ့လေ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေရာရောက်နေတာပေါ့။
သူတို့ပြောနေကြတာက ဒုရဲအုပ်မှ ၅၀၀၀၀ နှင့်အပြီး ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးလည်း ငွေပေးလိုက်တာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ မရက အဖွဲ့ဝင်တွေ ဆိုတာကလည်း ဘေးကနေ ညော်ပေးကြပေါ့ဗျာ။ ခဏနေကျတော့ ဒုရဲအုပ်လည်း လစ်သွားရော။ တာဝန်ကရှိသေးတာကိုး။ နောက်ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက် ရောက်လာပြန်ရော။ ခုနက ကိစ္စကို လာမေးနေသံကြားရတယ်။ အမျိုးသမီးကတော့ ပထမရဲနဲ့ မရကတွေ စားထားတာရှင်းပြီး ပြန်သွားတယ်။ ဒုတိယရဲက ဘယ်လိုလုပ်မှာလည်း ဘာညာ လာမေးနေတယ်။ မရကတွေကလည်း ပထမရဲကို အပြီးအစီး အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာ့ကိုလည်း နောက်နေ့ မနက်စာဧည့်ခံပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဂါရ၀ပြုဖို့ ပြောထားကြောင်း၊ မနက်ဖြန်အားရင် လာခဲ့ဖို့ ပြောသံကြားလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှာ ဒုတိယရဲလည်း စိတ်ချလက်ချ ထွက်သွားတော့တယ်။
အဆိုပါရဲလည်း ထွက်သွားရော မရကအဖွဲ့ဝင် ဆိုသူနှစ်ယောက် ပြောနေသံ ကြားရတာတော့
“သူတို့ချင်းကလည်း အဲ့ဒီလိုကွ” တဲ့။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ရပ်ကွက်ထဲက အကြောင်းတွေ ပြောနေကြသေးတယ်။ အရင်က အမှုသည်ဆီက လက်ဘက်ရည် တစ်ခွက်တောင် မသောက်ဘူးကြောင်း၊ အခုကြတော့လည်း လိုက်လံဆောင်ရွက် ပေးနေရကြောင်း၊ ကြေကြေကွဲကွဲကို ပြောနေကြတာ ဟိဟိ။ သူတို့အခုစားလိုက်တာလည်း နည်းတာမှတ်လို့။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး နည်းနည်းလေး လွဲနေတာလေးတွေ တွေ့တော့ လက်ယားလာလို့။ အဲ့ဒါကြောင့် အဲလက်စ်ကပြောတာနေမှာ
“တော်ပြီကွာ စိတ်ကုန်တယ် တောထဲက သစ်ပင်ပေါ်သွားနေမယ်.. ကျားကြီးပဲကိုက်သေသေ ကျေနပ်တယ် အားလုံးအေးဆေးပဲ”
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 8:37 PM3မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Labels: ခရီးသွားမှတ်တမ်း, တွေးစရာများ
ခြေထောက်တွင် ဗွေပါသော မိုးမှောင်တစ်ယောက် ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်ကို ကူးချည်သန်းချည် ဖြစ်နေပါသည်။ ခြေကလည်း ရှည်သမို့ ရန်ကုန်ရောက်ခိုက် နယ်ကျွံပြီး မြောက်ဒဂုံသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။ အပြန်လမ်းတွင်တော့ သာလိကာလေးနှင့် တွေ့ခဲ့ပါသည်။ သာလိကာလေး ဆိုသည်က သုံးနှစ်ခွဲ လေးနှစ်ခန့်ရှိသည့် ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်က ရှစ်မိုင်သို့ပြန်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် (၂၀၂) လိုင်းကား စီးခဲ့ပါသည်။ ထိုကားပေါ်တွင် ထိုကလေးနှင့် တွေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ကလည်း ကလေး ချစ်တတ်သည့်အတွက် ထိုကလေးအား ထိုင်ခုံတွင် အတူတူထိုင်ခိုင်း လိုက်ပါသည်။ ထိုကလေးမှာလည်း စကားက တတ်လှပါဘိ။ ကျွန်ုပ်မိုးမှောင်အား ကဏ္ဍစုံမှ အင်တာဗျူး သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုကလေး ကျွန်ုပ်မိုးမှောင်အား အင်တာဗျူးသွားသည်မှာ -
“ဟိုဘက်လမ်းက ကားတွေကကော ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲ”
“သူတို့က ဘာလို့ ဟိုဘက်က မောင်းနေတာလဲ”
“အော်.. ဒီဘက်လမ်းမှာ အတူတူမောင်းနေရင် တိုက်ကုန်မှာပေါ့. အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့က ဟိုဘက်ကနေ မောင်းတာပေါ့”
လက်ညိုးတထိုးထိုးဖြင့် မေးနေသဖြင့် ကျွန်ုပ်မှ -
“သားလက်ကို တစ်ခြားကားက တိုက်သွားမှာပေါ့”
“လက်ကျိုးသွားရင် သားဆေးကုရမှာပေါ့ .. ပတ်တီးလည်း စည်းရမှာပေါ့”
ထိုကလေးက သူ့ဘာသာ စဉ်းစားပြီး -
“အဲ့ဒါဆို ထမင်းစားလို့ မရတော့ဘူးပေါ့နော်.. ဒါဆို ပိန်သွားမှာပေါ့နော်.. ပြီးရင်သေသွားမှာပေါ့နော်”
သူဉာဏ်နှင့် စဉ်းစားမိသလို ပြောလိုက်ပါသည်။ မှတ်တိုင်တစ်ခုတွင် ကားရပ်စဉ် ကားခေါင်မိုးကို မော့ကြည့်ပြီး -
“အသံက ဘယ်က လာတာလဲဟင်”
သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် လမ်းမှ ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှတ်မှတ်ရရ မျိုးကြီး သီချင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း လမ်းမပေါ်ချထားသည့် Sound Box များကို ညွှန်ပြပြီး
သီချင်း ဖွင့်ထားသူများကလည်း ဟုတ်သည်။ Sound Box (၈) လုံးခန့်စီထားပြီး ဖွင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့နှင့် ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ရောက်လာသည့် အခါ -
“ကားတွေသွားဖို့ပေါ့.. ဟိုဘက်လမ်းက ကားသုံးစီး ဒီဘက်လမ်းက ကားသုံးစီး တပြိုင်တည်း သွားလို့ရတာပေါ့”
သို့နှင့် ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံသို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။
“တခြားအထပ်တွေသွားလို့ရအောင်ပေ့ါ.. အပေါ်တက်လိုက် အောက်ဆင်းလိုက် လုပ်လို့ရတယ်လေ”
ရှစ်မိုင် မှတ်တိုင်သို့ရောက်၍ ကျွန်တော်လည်း ဆင်းရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်
“သားရေ လစ်ပြီ ”
သာလိကလေးက နည်းနည်းမှ မလျှော့
လမ်းတွင်တော့ ကျွန်တော်စဉ်းစား ကြည့်မိပါသည်။ ကလေးတစ်ယောက်တွင် မိမိထင်ရာကို နှစ်သက်သလို ပြောနိုင်စွမ်း မေးနိုင်စွမ်းများ ရှိပါသည်။ သူတို့၏ မေးမြန်းမှုသည် မှားယွင်းသွားပါက ရှက်စရာကောင်းသည်ဟု သူတို့တွင် ရှက်စိတ်လည်း မရှိသေးပါ။ စူးစမ်းချင်သည့် စိတ်ကအပြည့် ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ရောက်လာသည့် လူကြီးများတွင်တော့ မေးရမြန်းရမှာ ရှက်တတ်သည့် စိတ်များ ကိန်းအောင်းလာပါပြီ။ တစ်ခုခု မှားယွင်းပြီး မိမိအပေါ် အထင်သေးသွားမှာကို ကြောက်သည့်စိတ်များလည်း ရှိလာပါပြီ။ ထို့အတူ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်စွမ်းလည်း ပျောက်ဆုံးလာပြီဟု ဆိုရပါမည်။ တနည်းအားဖြင့် ဟန်ဆောင်တတ်လာသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးဘ၀သည် ဖြူစင်လှပါသည်။ သာလိကာလေးရေ မင်းကိုတော့ ဆလန်ပါပဲကွာ………
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 8:44 PM 1 မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
ခိုးကူး..... ခိုးကူး..... ခိုးကူး.....
သားစိုးနဲ့ ဖိုးချစ် CITY FM (၆) နှစ်ပြည့် အခွေမှ သီချင်းကို နားထောင်ပြီး တွေးမိတာပါ။ သီချင်းစာသား အလိုအရတော့ ခိုးကူးခွေတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂီတသမားတွေလည်း အခြေပျက် နေတာကြောင့် သဘင်သည်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သီချင်းဆိုနေရကြောင်း ခိုးကူးခွေတွေ ဒုက္ခပေးနေကြောင်း ရေးထားတာပါ။ ခိုးကူးခွေတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာရတာလဲ။
အရင် CD, VCD တွေ မပေါ်ခင် တိတ်ခွေ ခေတ်တုန်းကတော့ ယခုလောက် ခိုးကူးပြဿနာ မရှိသေးပါ။ Selection သီချင်း တိတ်ခွေတွေ ကူးကြသည်တော့ ရှိပါတယ်။ ဘာလို့ ခိုးကူးတွေ အဲ့ဒီအချိန်က မကျယ်ပြန့် ရတာလဲ။ ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Original အခွေ တန်ဖိုးနဲ့ Selection ပြန်ကူး သီချင်းခွေတွေရဲ့ တန်ဖိုး သိပ်မကွာတာလည်း တစ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသံ အရည်အသွေးမှာလည်း Original က ပိုသာပါတယ်။ တိတ်ခွေခေတ်တုန်းက ပေါ့လေ။
CD, VCD ခေတ်မှာကြတော့ အခွေ တန်ဖိုးအရဆိုရင် ခိုးကူးတွေဟာ Original အခွေတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သာ ပေးဝယ်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Original တစ်ခွေဝယ်ရင် ခိုးကူးက (၃) ခွေလောက် ဝယ်လို့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး တွက်ကြည့်တာပါ။ အရည်အသွေး ကြတော့လည်း တစ်ချို့ ခိုးကူးခွေတွေဟာ Original အခွေတွေလောက်နီးနီး (သာရင်တောင် သာသွားသေးတယ်) ရှိကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူများစု အသုံးပြုနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် VCD, DVD စက်တွေကလည်း ခိုးကူး CD တွေကို အားပေးပါတယ်။ အထစ်အငေ့ါမရှိ ဖတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ Original အခွေကမှ ထစ်နေသေးတယ်။
အခုလာပြန်ပြီ Selection DVD အခွေတွေ။ ကဲ Original အခွေတွေ နလန်ကော ထူးနိုင်ပါအုံးမလား။ ၁၀၀၀ ပေးပြီး တစ်ခွေဝယ်လိုက်ရင် အနည်းဆုံး VCD သီချင်း ပုဒ်ရေ (၅၀) (၆၀) လောက်ပါတယ်။ VCD ငါးခွေစာပေါ့လေ။ အမြဲတမ်းတော့ ခိုးကူးခွေတွေက နှာတစ်ဖျားသာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခိုးကူးခွေတွေ ပျောက်နိုင်ပါ့မလား။ တကယ်တော့ အသိဉာဏ်ပညာ မူပိုင်ခွင့်အရတော့ ယခုလို မူပိုင်ခွင့် အလွဲသုံးစား လုပ်မှုကို ရှုံ့ချရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အများစု ခိုးကူးခွေတွေကို လက်မလွှတ်နိုင် သေးပါဘူး။ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မှု၊ စရိတ်သက်သာမှု စသည်တို့က ဆွဲဆောင်နေစဲပါ။ မိတ်ဆွေသင်ကော ခိုးကူးခွေ မဝယ်ဘူးဖူးလား။ Original အခွေကိုသာ ဝယ်ယူအားပေးနေသူလား။ သို့ဆိုလျှင် သင့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဂုဏ်ပြုခံနိုင်လောက်သည့် အဆင့်မဟုတ်သေးပါ။
ရေးတဲ့သူ မိုးမှောင် at 8:12 PM5မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါ.
Labels: တွေးစရာများ, ရောက်တတ်ရာရာ
Online တွင် ရှိနေသူများ
ဉာဏ်စမ်း ပုစ္ဆာ (2)
ဗွီဒီယို၊ MTV၊ VCD သီချင်းများ (1)
အမှတ်တရ စာသားများ (3)
အရောင်များ၏ သဘော (10)
လအလိုက် ရေးခဲ့သမျှ February 2009 (3) January 2009 (3) December 2008 (1) November 2008 (3) October 2008 (3) September 2008 (6) August 2008 (7) July 2008 (21) June 2008 (8) May 2008 (6) April 2008 (3) March 2008 (4) January 2008 (5) December 2007 (6) August 2007 (5)